June | 2007 | Layma's World | Page 2
Posted on June 17, 2007 by layma
P.s. နောက်မှ ဒုတိယပိုင်းမှာ ဆက်ပျော်တော့မယ်……အိပ်တော့မယ်…..
အဖြူ ဆိုသည်မှာ……. အလွန်နှစ်သက်မိသော…..အကြိမ်ကြိမ်ပြန်ဖတ်မိသော…… ဂျာနယ်ကျော်မမလေး၏ “အဖြူ”…… စာမျက်နှာ ၉၅ မျက်နှာဘဲ ပါတဲ့ စာအုပ်လေးပါ…..ဒါပေမယ့် ဖတ်ပြီးတိုင်း ရင်ထဲမှာ နင့်နေအောင် ခံစားရတယ်…..။
မဖတ်ဖူးတဲ့သူတွေ အတွက်အမြည်းလေး တင်ပေးလိုက်တယ်…..။
ခေတ်—လွတ်လပ်ရေးရဖို့ကြိုးစားဆဲကာလ….
ကိုမြတ်စိုး—-အဖြူနှင့် တိုင်းပြည် ကိုချစ်သူ….၊ တော်လှန်ရေးသမား…..
“ …..ကိုမြတ်စိုးကို ချစ်ရမှာ အဖြူဖြင့် အင်မတန်မှ စဉ်းစားစရာကြီးဖြစ်နေပါပြီ….”
“ဘာပြုလို့ လဲ ဖြူက သိပ်ပြီး အရေးပါ အရာရောက်တဲ့ ဘုရင်ခံရဲ့ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးရဲ့ သမီး…..ကိုမြတ်စိုးကတော့ တော်လှန်မယ့် သူပုန်လောင်းမို့စဉ်းစားဖို့ ….”
“ ….ကိုမြတ်စိုးကို ဖြူ သူပုန်လို့မစွပ်စွဲရပါလား ၊ ကိုယ့်အမျိုး ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကို အောက်ကျနောက်ကျ ဖြစ်နေတာကို သူများတွေနဲ့ရင်ဘောင်တန်းဖြစ်အောင် မြှင့်ချင်တဲ့လူကို အဖြူ သူပုန်လို့ဘယ်မှာ စွပ်စွဲနိုင်မလဲ၊ ……ကိုမြတ်စိုး အမျိုးကိုချစ်သလို ဖြူလဲ ချစ်ပါတယ်၊ သူများတိုင်းပြည်တွေကို မြင်ရလေလေ၊ အမျိူးကို ပိုပြီး သနားလေလေ ချစ်လေလေပဲ…….ဒါပေမယ့် အခု ကိုမြတ်စိုး အရေးမှာတော့ ဖြူ့ စိတ်ကို ဖြူ ပိုင်ပေမယ့် ဖြူ့ခန္ဓာကိုယ်ကို ဖြူ့ အဖေ က ပိုင်နေတော့ အစိုးရကို တော်လှန်မယ့် အတိုက်အခံ ခေါင်းဆောင် တစ်ဦးကို ဖြူက စိတ်ရောကိုယ်ပါ အပ်နှင်းလိုက်တယ်လို့အဖေပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးရဲ့ နားကို ကြားဖို့ရာတော်မတော် ဖြူ့ဘက်ကလဲ ကြည့်ပြီးစဉ်းစား ပေးပါဦး…..”
“….သူ့ အခြေ အနေ၊ အရည်အချင်း၊ အလုပ်အကိုင်ကကော”
“….အရည်အချင်းကတော့ ကောလိပ်ကထွက်ပြီး ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဘ၀နဲ့ထောင်ခဏခဏကျ….”
“ သြော်…..ဒါက အရည်အချင်းလား”
“ အလုပ်အကိုင်ကတော့ နိုင်ငံရေး…..” …………………………..
အမြည်းဆိုတော့ ဒီလောက်ဘဲ ပေးမြည်းမယ်…..။ မြန်မာမှာဆိုရင် အဟောင်းဆိုင်မှာသွားရှာ…..၊ အဝေးက ဆိုရင် ebook မှာရှာ…..(တွေ့ရင်ပြောဦးနော်)…..။ ဒီ ၉၅ မျက်နှာကို ဖတ်ပြီး တွေးမိတာတွေကအများကြီး……ရသတွေလည်း စုံတယ်…..။ အဖြူ့ ကို ကိုမြတ်စိုး ပေးခဲ့တဲ့ စာ အဖြူ့ အဖေ လက်ထဲ ရောက်သွားလို့သားအဖ နှစ်ယောက် အပြန်အလှန် ပြောကြတဲ့ အခန်းကို သိပ်ကြိုက်တာဘဲ…..။ စကားလုံးတွေက ပညာသား ပါတယ်….။ ဇာတ်သိမ်းခန်းကတော့ ရင်ထဲမှာ ဘာမှမရှိတော့သလိုလို…..ရင်ထဲမှာပြည့်ကျပ်နေလို့အသက်ရှူ မ၀သလို ဖြစ်ကျန်ခဲ့စေတယ်…….။ ။
Filed under: Thinkings from novels |	2 Comments »
Posted on June 15, 2007 by layma
Posted on June 14, 2007 by layma
I’ve gotapain in my left abdomen…..I went to seeadoctor…..She instructed me to make an ultrasound…..Ultrasound result showed that there wasacyst in my left ovary and it was ruptured…..The radiologist advised me to see my doctor as soon as possible…..So, I went to see my specialist and she said that she would make laparotomy…..What’s this ? She said that it’s an operation…..I’ve gotashock…….
I don’t want to make this operation……I was scared of this…..But I’m not able to do anything…..
I can’t sleep the whole night before the operation…..I was thinking about my operation…….Am I alive or not ? What kinda pain could I get ? Shall I meet my family again ? ……..??? I thoughtalot….Although I tried to sleep by counting numbers and sheep , I couldn’t……That night was very long and dark…….
That morning , I was very nervous ……They changed me with operation dress…..My family encouraged me…..I was not able to say anything……I only prayed to the Lord Buddha to be alive and relieve from pain….
In the operating theatre , they gave me an injection , covered my nose with mask and one of the doctors said that you would sleep forawhile and during this time you could travel all over the world…….Another doctor asked me some question like……” what’s ur name ? What’s ur work ? is this ur first experience ? …..so on…..Then , I fell asleep while I’s answering to him……..My soul was away from this O.T room…..
When I awoke from my deep sleep , I heard thatadoctor called my name…..” hello , dear….are u ok ? “……First of all , I thought that voice was from my dream then , I recognized my condition…..My operation was over………I replied immediately ” Thank You , doctor”…..
I’m still alive !!!
Posted on June 13, 2007 by layma
Kaufmann မိသားစု ရဲ့ အပန်းဖြေ စံအိမ်လေးကို တောအုပ်လေးထဲက ရေတံခွန်လေးနားမှာ ဆောက်ချင်ပါသတဲ့……သာမာန်ဗိသုကာ ဆိုရင်တော့ ရေတံခွန်ကို မျက်နှာမူပြီး ဆောက်မှာပေါ့….ခုဟာက modern architecture ရဲ့ဖခင်ကြီး Frank Lloyd Wright ဆိုတော့ တမူထူးခြားတဲ့ စိတ်ကူးနဲ့ရေတံခွန်ပေါ်မှာဆောက်ခဲ့တယ်……လူဆိုတဲ့လူတွေက ရေကိုမြင်ရင် ပျော်တယ်….၊ ရေသံကြားရင် သိမ်မွေ့(စိတ်နှလုံး နူးညံ့ သိမ်မွေ့ ခြင်း) တယ်…..ရေနဲ့ထိရရင် လန်းဆန်းတယ်……။ ဒီအိမ်လေးမှာ ရေကိုမြင်ရမယ့် တဆက်တည်း တတန်းတည်းဖောက်ထားတဲ့ ပြတင်းပေါက်ကျယ်ကြီးတွေ…….. ၀ရန်တာကျယ်ကြီးတွေ ပါဝင် ပါတယ်……။ အိမ်အောက်ကစီးဆင်းနေတဲ့ ရေစီးသံကို အိမ်ထဲမှာဘယ်နေရာကဖြစ်ဖြစ် ကြားနေရတယ်…..။ ဧည့်ခန်းတွင်းက လှေခါးလေးအတိုင်း ဆင်းသွားရင်တော့ အသံကြား လှမ်းမြင်နေရတဲ့ စမ်းချောင်းလေးရှိရာကိုရောက်နိုင်ပါတယ်…..။
လူတွေဟာ သဘာဝကို ချစ်မြတ်နိုးကြတယ်…..မတတ်သာလို့မှန်လုံအိမ် ၊ ကွန်ကရစ် အုတ်တိုက်ထဲမှာ နေကြရပေမယ့် ဖြစ်နိုင်ရင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့နီးစပ်ချင် ကြတယ်…..။ ဗိသုကာက ဒီအိမ်လေးကို ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့တသားတည်းဖြစ်နေအောင် ပုံစံထုတ်ထားတယ်……။ ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ ကျောက်တုံး ကျောက်ခဲ တွေနဲ့အိမ်အတွင်း အပြင်ကို မွမ်းမံထားပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ကို အလွယ်တကူ လှမ်းမြင်နေနိုင်တဲ့ အတွက် အိမ်ထဲမှာနေရတဲ့ အိမ်သူအိမ်သားတွေအဖို့ရေတံခွန် နောက်ကွယ်က ကျောက်လှိုဏ်ဂူထဲမှာ နေရသလို ခံစားရမှာပါ……။ အိမ်ပုံစံကိုလည်း ရေတံခွန်ပုံကို အခြေခံထားပါတယ်……။
ဒီအိမ်လေးက အရင်က အပန်းဖြေစံအိမ်လေး……
အခုတော့ ကမ္ဘာကျော်သော အိမ်ကလေး ၊ ပြတိုက်ဖြစ်သွားသော အိမ်ကလေး ၊ ငွေရှာပေးသော အိမ်ကလေး……၊ အဲဒီ အိမ်ကလေးက Fallingwater House……..။ ။
Filed under: Architecture |	2 Comments »
Posted on June 10, 2007 by layma
သူတို့သွားကြသည်…
သူတို့သွားကြလေပြီ…
အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် သူတို့သွားကြသည်…ရည်ရွယ်ချက်အမျိုးမျိုး ၊ ခံယူချက် အမျိုးမျိုးဖြင့် သူတို့သွားကြသည်….။ သူတို့ထဲမှာ လူတော်တွေပါသွားသည်…..လူကောင်းတွေပါသွားသည်….လူယဉ်ကျေးတွေပါသွားသည်…..လူပေလူတေတွေလည်းပါသွားသည်…..။
နာဆာအဖွဲ့မှာမြန်မာပါသတဲ့….လကမ္ဘာတက်တဲ့အထဲ မြန်မာပါသတဲ့….အသက်ကယ်မယ့် အဖိုးတန် နည်းပညာတစ်ခု ကမ္ဘာကို ပေးလိုက်နိုင်တာ မြန်မာရူပဗေဒပညာရှင်တဲ့…..Australia က နာမည်ကြီး နှလုံးခွဲစိတ် ဆရာဝန်ကြီးက မြန်မာတဲ့…..America က….အရေးပြားအထူးကု ဆရာဝန်မကြီးက မြန်မာတဲ့…..နိုင်ငံခြား တက္ကသိုလ်တချို့ က ဆရာတချို့ ဟာမြန်မာတဲ့…… Los Angeles ရဲ့ projects တွေအတွက် architectural guidelines တွေရေးဆွဲပေးတာမြန်မာတဲ့ (ဆရာကြီး ဦးမျိုးမြင့်စိန်)…..အများကြီးကျန်သေးတယ်….မရေးတော့ဘူး….( ၀မ်းနည်းပက်လက် ဖြစ်ကုန်မှာ စိုးလို့ )…..။
လူငယ်တွေ သွားကုန်ကြပြန်ပြီ…..( ရန်ကုန်စက်မှု တက္ကသိုလ် ဆရာကန်တော့ပွဲကို Singapore တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်…..ဗိသုကာ သက်ကြီးပူဇော်ပွဲတွင် ကန်တော့မည့် လူငယ်များ နည်းလှသည်…..လူလတ်ပိုင်းတော့ အနည်းငယ်ရှိသည်……။)
A good housewife….A good adviser….A good nurse….A good chef…..A good teacher….
This5in 1 Lady is “my mom”……….As she graduated from the Institute of Education , her first posting was inasmall village within Yemaethin township……..She was pregnanted with my sister at that time…….There was tear in my father’s eyes when he had left her alone at that village …….After being delivered ofababy , she hadapuzzel of what should she do ? Finally , she had chosen the life of housewife…….She discarded her job……..
She devoted her life for the family……..She handled the house and family without being maid………Her hands were busy through the day. We (my sister and I ) didn’t need private teachers for our school lessons until 8 standard……..She taught us everynight……. She also played with us……She made dolls made up of paper and fabric…….She made our dress and other wearings like sweaters, shawls , and hats…..In my childhood , I was always boasting about my colourful shawls made by my mother…..My school uniforms were also made by my mother…..She bought story books and practised our reading. She look after us likeachild till this time….
She looks likeagardener……We are flowers in her garden…..Now, we had bloomed….Is there any profit for the gardener?……. Has she got worthy prize for giving up her identity ?……
Posted on June 9, 2007 by layma
He is my hero…..I have ever heard and read about the hero all over the world. But no one is as brave as him. He is always ready to protect me……
He is the person I admire most…..He is not only very talented in his work but also expert in family care……
He is my best friend….He is open-minded. Although we are father and daughter, I can discuss everything with him. In some family, there isacommunication gap between parents and teenagers. But I didn’t face with this problem. I can trust him as my intimate friend. I can tell him about my dream……
He is my best teacher….He didn’t teach me but advise me. He didn’t train me but I’ve gotagood-training from him. He never decided instead of me, but he let me know what he want to be…..
I tried to beagood lady, citizen, …….n….All are just because of him. I always keep his words in my heart….That is ” Honey, I and your mother started our life from negative…Now, I’ve tried your life to be in positive situation….so, what would u like to be?? Would u like to have positive, negative or zero situation ? That’s only depend on u….not depend on me…So, ask yourself, try ur best, try to be……”
I am his pride…..He is always proud of me. There isabig smile on his face whenever I have success. In my school life, I always try hard for him….
I am his clone…..My eyes, my lips, my skin, my behaviour are alike with his. I’m very proud of having same thinkings and hobby with him.
I am his heart…..He didn’t express his love by saying “I love you”. But I can feel that I’m in his heart.
Now I’m already 27 and I can stand by myself. But I need him and his words more than last years…..
“Daddy , please give me your love and care more…..I LOVE U SO MUCH !!!!”